पत्रपत्रिका Archives | Page2of 18 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - पत्रकारका लागि असुरक्षित बन्दै भारत ! - page 2
पत्रकारका लागि असुरक्षित बन्दै भारत !
सुरेशराज न्यौपाने नयाँदिल्ली । जम्मु–कश्मीर राज्यको राजधानी श्रीनगरका वरिष्ठ पत्रकार सुजात बुखारीको हत्या प्रकरणसँगै पुन : एकपटक भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा उनीप्रति श्रद्धाञ्जलिका शब्दहरूसँगै पत्रकारको सुरक्षाबारे चिन्ताहरू प्रकट गरिनुका साथै सरकारको समेत व्यापक आलोचना भएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
कुलचन्द्र न्यौपाने / नगेन्द्र अधिकारी हेटौंडा । कांग्रेसमा संघीय ढाँचाअनुसार पार्टी संरचना रूपान्तरण गर्न स्थानीय र प्रदेश अधिवेशन तत्काल गर्नुपर्ने माग उठेको छ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा मंगलबार सुरु जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले स्थानीय तह र प्रदेश तहको संरचना निर्माण गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएको हो । जिल्ला सभापतिहरूले १४ औं महाधिवेशन नभएसम्म अहिलेकै महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट अधिवेशन गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, संस्थापन पक्ष यो मागप्रति सकारात्मक देखिएको छैन  ।	थप पढ्नुहोस्
कक्षा ११ र १२ मा एक वर्ष परीक्षण गरेपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लागू हुने
सुदीप कैनी काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ का लागि तयार पारिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एक वर्ष परीक्षण गरेपछि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम २०७६ को शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । नयाँ पाठ्यक्रमबारे विवाद बढेपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्ले तत्कालका लागि परीक्षणका रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सोमबार गरेको हो। शिक्षाविद्, गणितरविज्ञानका विषयविज्ञ, निजी शैक्षिक संस्था र पुस्तक प्रकाशकहरूले यसै वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
गणेश राई काठमाडौं । भाषा आयोग गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्यो । समयका हिसाबले यो निकै लामो हो । तर आयोगमा न सदस्य नियुक्त गरिएको छ, न कुनै नीतिगत निर्णय नै हुन सकेको छ । सदस्य नियुक्ति नहुँदा आयोगको ५ वर्षे रणनीतिक मार्गचित्र निर्माण हुन सकेको छैन । आयोग अध्यक्ष डा। लवदेव अवस्थीले कर्मचारीको भरमा कार्यक्रम सुचारु राखेका छन् । आयोगले सल्लाहकार समूह गठन गरे पनि समन्वय गर्न सकेको छैन । चालु वर्षमा आयोगको बजेट ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये कार्यक्रमतर्फ ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ  ।	थप पढ्नुहोस्
सिकलसेलको अवस्था भयवह !
काठमाडौं । नेपालको तराई क्षेत्रका थारु समुदायमा बढी केन्द्रीत सिकलसेल एनिमियाबाट भावी पुस्तालाई जोगाउन रोगको परीक्षण, परामर्श र जनचेतनालाई बढाउनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुसन्धानदाता सरकारी संस्था नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ। बर्दियाका थारु समुदायमा सिकलसेलबाट लामो र व्यवस्थित अनुसन्धान गरिरहेको परिषद्ले परीक्षाबाट रोग भए नभएको यकिन भएपछि भावी पुस्तामा रोग सर्न रोक्न काम अगाडी बढाउन सकिने भन्दै सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
हिमाल लम्साल काठमाडौं । ‘मेलम्चीको पानी कहिले आउला ?’ दशकौं देखिको जिज्ञास हो यो । सरकार बेलाबेलामा यसको मिति सार्वजनिक गर्छ । तर, पटकपटकको मिति गुर्जादा पनि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आएको छैन् । अझै, कति समय लाग्ने हो, यसको किटान सरकारसँग छैन्। तर, मेलम्चीको पानी सुन्दरजलमा खसेको खण्डमा भने उपत्यकामा पानी साता दिनभित्रै पुग्ने निश्चित भएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले त्यसको लागि सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्देशनलयले पाइपलाइन ओछ्याउने काम सपन्नसँगै वितरणलाइनको पाइप परीक्षण समेत थालेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत पहिलो राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि सोमबार गोलाप्रथाद्वारा निर्धारण हुँदै छ । सभाका ५९ सांसदमध्ये गोलाप्रथाबाट १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ वर्ष र बाँकी २० जनाको ६ वर्ष पदावधि निर्धारण गरिनेछ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पूर्ण कार्यकाल ६ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यो स्थायी सदन भएकाले अविच्छिन्न राख्न संविधानले पदावधि सकिने सदस्यको स्थानमा पुनस् निर्वाचन भई सदस्य थपिँदै जाने व्यवस्था गरेको छ  ।	थप पढ्नुहोस्
चन्द्रशेखर अधिकारी काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा करिब एक दर्जन सहमति र सम्झौता हुने भएका छन् । तर, यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलले भने अन्तिम रूप नपाउने भएको छ  ।	थप पढ्नुहोस्
पवित्रा सुनार काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोग महिनौंदेखि पदाधिकारीविहीन छ। दुई वर्षदेखि पालैसँग आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको हो। पदावधि सकिएका पदाधिकारीको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। आयोगका अनुसार गत भदौमा आयोगका सदस्यहरु मञ्जित ताम्राकार र गोविन्द सुनारको पदावधि सकिएपछि आयोग पूरै रित्तो बनेको छ। आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीको दुई वर्षअघि नै पदावधि सकिएको थियो। अन्य सदस्यको डेढ वर्षअघि पदावधि सकिएको थियो। आयोगका सदस्यसचिव सीताराम घलेको पदावधि गत असारमा सकिएको थियो । आयोगमा १७ जना पदाधिकारी थिए ।	थप पढ्नुहोस्
प्रकाश तिमल्सिना काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको चाप कम गर्ने उद्देश्यसहित ७ वटै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गरिने भएको छ। निजामती सेवा, नेपाल स्वाथ्य सेवा, संसदीय सेवाको क्षेत्रमा सीमित रहँदै आएको प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार पनि बढाउने गरी सरकारले तयारी सुरु गरेको छ । प्रशासकीय अदालत उच्च अदालतसरह मानिन्छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा लैजाने तयारी गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्